အာဆီယံ ယူ-၁၉ ရုပ်/သံ၌ပြမည်
မြန်မာယူ-၁၉အသင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် အာဆီယံယူ-၁၉ ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲ အုပ်စုပွဲစဉ်များကို MRTV Entertainment Channel မှအကြိုဗိုလ်လုပွဲမှစ၍ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် ပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တောင်အာရှဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် SAFF ယူ-၁၆ ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲတွင် အိမ်ရှင်ဘင်္ဂလားဒက်ခ်ျ အသင်းဗိုလ်စွဲခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
AFFအကောင်းဆုံးဆု ၂၂ ရက်နေ့ချီးမြှင့်မည်
အာဆီယံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (AFF) တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး ဆုပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားနှင့် AFF ကွန်ဂရက် အစည်းအဝေးကို မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်မှ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် အိမ်ရှင်အဖြစ် Novotel Yangon Max တွင်ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်သည်။ အာဆီယံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်၏ တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံးဆု များပေးအပ်ပွဲကို ယင်းနေ့ ည(၇း၀၀)နာရီတွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဆုအရေအတွက် (၁၈)မျိုးအထိ ပေးအပ် သွားမည်ဖြစ်သည်။
၁။ အထက်အကြောင်းအရာပါ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ၁၁-၈-၂၀၁၅ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် အစည်းဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် MNL CEO.MNL COO. တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(တာဝန်ခံ လက်ရွေးစင်များအသင်း) MFF . မြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းနည်းပြချုပ် တို့နှင့် MNL-1ကလပ်အသင်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ချက်များအရ Ooredoo MNL 2015( M-1) ပြိုင်ပွဲ၂၀၁၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၂၂) ရက် နှင့် (၂၃)ရက် တို့တွင် ယှဉ်ပြိုင်ကစားရန် သတ်မှတ်ထားသည့် Week(16) ပွဲစဉ်များအား ၂၀၁၅ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၉)နှင့် (၃၀)ရက်သို့ပြောင်းရွှေ့ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ လေ့ကျင့်လျှက် ရှိသည့် မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် ယူ-၁၉ အသင်းသည် ဒုတိယမြောက် ခြေစမ်းပွဲ အဖြစ် သြဂုတ် ၁၉ ရက် ညနေ ၇း၀၀ နာရီတွင် ထိုင်း ယူ-၁၉ အသင်းနှင့် ခြေစမ်း ကစားမည် ဖြစ်သည်။
ရေဘေးအလှူ ရန်ပုံငွေပွဲအဖြစ် ခြေစမ်းပွဲကျင်းပမည်
မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၏ ညှိနှိုင်းကမ်းလှမ်းမှု အဖြစ် နယူးဇီလန် လက်ရွေးစင် ဘောလုံး အသင်းသည် မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် အသင်းနှင့် စက်တင်ဘာ (၇)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ခြေစမ်းပွဲ လာရောက်ယှဉ်ပြိုင် ကစားမည်ဖြစ်သည်။ ခြေစမ်းပွဲမှ ရရှိသော ကွင်းဝင်ကြေးများနှင့် လှူဒါန်းမှုများအား ရေဘေးဒဏ်ခံ မိသားစုများ သို့ထောက်ပံ့ လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ရာ အဆိုပါ ခြေစမ်းပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်နှင့် နယူးဇီလန် နိုင်ငံသံရုံးမှ Deputy Head of Mission မစ္စတာ စတီဖင်ဝမ် တို့သည် ယနေ့ မနက် (၁၁း၀၀)နာရီက YTC ကွင်း အစည်းအဝေး ခန်းမတွင် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။
သြဂုတ် ၂၃ ရက်မှ စက်တင်ဘာ ၄ ရက်ထိ လာအိုနိုင်ငံ ဗီယန်ကျင်းမြို့တွင် ကျင်းပမည့် အာဆီယံ ယူ-၁၉ ချန်ပီယံရှစ် ဘောလုံး ပြိုင်ပွဲသို့ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့် မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် ယူ-၁၉ အသင်း၏ အပြီးသတ် လူစာရင်းကို နည်းပြချုပ် ဂတ်ဆီဇီက ထုတ်ပြန် လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
၂၀၁၅ အာဆီယံယူ-၁၆ ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲ (AFF U-16 Championship 2015) တွင် ဒုတိယငွေတံဆိပ်ဆုနှင့် အသန့်ရှင်းဆုံးအသင်းဆု ရယူနိုင်ခဲ့သည့် မြန်မာယူ-၁၆ အသင်းသည် ယမန်နေ့ ညနေ (၃း၀၀) တွင် ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံ၊ ဖနွမ်ပင်မြို့မှ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ပြန်လည်ဆိုက်ရောက်ခဲ့သည်။
အာဆီယံယူ-၁၆ပြိုင်ပွဲ ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များကို ယမန်နေ့ညနေပိုင်းက ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၌ ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင် ကစားရာ မြန်မာအသင်းသည်လာအိုအသင်းကို အနိုင်ယူပြီးဗိုလ်လုပွဲသို့ တက်ရောက်သွားသည်။
အာဆီယံယူ-၁၆ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအုပ်စု B ၏နောက်ဆုံးပွဲစဉ်များကို ယမန်နေ့ကကျင်းပခဲ့ရာ သြစတြေးလျနှင့်မြန်မာတို့ နိုင်ပွဲရခဲ့ပြီး ဆီမီးဖိုင်နယ်သို့တက်ရောက် နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ရခိုင်၊ စစ်ကိုင်း၊ မကွေးနှင့်ဧရာဝတီမြစ်ဝ ကျွန်းပေါ်ဒေသများတွင် ဖြစ်ပွားနေသော ရေဘေးဒုက္ခများအတွက် အခြားဒေသများမှပြည်သူများက အလှုငွေနှင့်ပစ္စည်းများအား လိုက်လံစုဆောင်းကာ ရေဘေးသင့်ပြည်သူလူထုထံ ပို့ဆောင်လှုဒါန်းလျက်ရှိနေကြပြီး ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် YUFC မှကစားသမားများကလည်း ဟာသအနုပညာရှင်များနှင့်အတူ ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးအတွက် အလှုခံထွက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာယူ-၁၆အသင်းမှာ ယမန်နေ့ကသြစတြေးလျနှင့်ပွဲတွင် ၄ ဂိုးပြတ်ဖြင့်ရှုံးနိုမ့်သွားခဲ့သဖြင့် အနည်းငယ်ဖိအားဝင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားတွင် ကျင်းပနေသော အာဆီယံယူ-၁၆ပြိုင်ပွဲတွင် အုပ်စု A မှထိုင်းနှင့်လာအိုအသင်းတို့မှာ ဆီမီးဖိုင်နယ်သို့ တက်ရောက် နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
၂၀၁၅ ရာသီဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဒိုင်း ရှုံး/ထွက် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကွားတားဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်များကိုဆက်လက် ယှဉ်ပြိုင်ကစားရာ ဧရာဝတီအသင်းနှင့် ရခိုင်အသင်းတို့ ဆီမီးပွဲစဉ်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။
သြဂုတ်လအတွင်းကျင်းပမည့် ဖူဆယ်ပြိုင်ပွဲနှင့်အောက်တိုဘာလအတွင်း ကျင်းပမည့်ဖူဆယ်လိဂ်ပြိုင်ပွဲများမှ လက်ရွေးစင် ကစားသမားများရွေးချယ်ကာ နိုင်ငံတကာဖူဆယ်ပြိုင်ပွဲများ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် သက်တမ်းအလိုက်ဖူဆယ် အသင်းများကို ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖူဆယ်ကောမတီဥက္ကဌ ဦးကြည်မင်းသိန်းကပြောဆိုခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့တော်အိုလံပစ် အားကစားကွင်းကြီး၌ ကျင်းပလျက်ရှိသော AFF BIDC U-16 CHAMPION -SHIP 2015 ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၏ တတိယပွဲစဉ်များကို သြဂုတ် ၃ ရက်တွင်ယှဉ်ပြိုင်ကစား ကြမည်ဖြစ်ပြီး အုပ်စု(ခ)တွင်မြန်မာယူ-၁၆ အသင်းနှင့်သြစတြေးလျ ယူ-၁၆ အသင်းတို့အုပ်စု ဗိုလ်လုကြမည်ဖြစ်သည်။
ယူ-၁၆ အုပ်စု A ပွဲစဉ်များ
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်တွင်ကျင်းပနေသော အာဆီယံယူ-၁၆ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကို ယမန်နေ့ကဆက်လက် ကျင်းပခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်တွင် ကျင်းပနေသောအာဆီယံယူ-၁၆ ပြိုင်ပွဲ၏ယမန်နေ့အုပ်စု A ပွဲစဉ်များတွင် လာအိုမှာနောက်ထပ် နိုင်ပွဲတစ်ပွဲရရှိခဲ့သည်။
ယမန်နေ့ကစင်္ကာပူနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့သော အာဆီယံယူ-၁၆ ပြိုင်ပွဲအပြီးတွင် မြန်မာယူ-၁၆ နည်းပြအဲရစ်ဝီလျံက"ကျွန်တော် ဒီနေ့ စင်္ကာပူနဲ့ပွဲရလဒ်ကို ကျေနပ်ပါတယ်။
ယူ-၁၆ ပြိုင်ပွဲ မြန်မာအနိုင်ရ
အာဆီယံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (AFF) ကကြီးမှုးကျင်းပလျက်ရှိသည့် ၂၀၁၅ အာဆီယံယူ-၁၆ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအုပ်စု (ခ) ပွဲစဉ်များကိုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့ရှိအိုလံပစ်ကွင်း၌ ကျင်းပရာမြန်မာအသင်းမှာ စင်္ကာပူအသင်းကိုအနိုင်ယူပြီး ပွဲဦးထွက် ၃ မှတ်ရရှိခဲ့သည်။